သင့်ရဲ့ Webinar မြှင့်တင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေကဘာလဲ။
သောကြာနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 20, 2013 စနေနေ့, မေလ 7, 2016 Jenn Lisak Golding
2013 ခုနှစ်, B62B ၏ ၆၂% သည် webinars ကိုအသုံးပြုခဲ့သည် ၄ င်းတို့၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကိုမြှင့်တင်ရန်၊ ယခင်နှစ်က ၄၂% မှတိုးတက်လာသည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့, webinars လူကြိုက်များလာနေကြသည်နှင့်သူတို့ဖြစ်ကြသည် ခဲမျိုးဆက်တစ်ခုအဖြစ်အလုပ်လုပ်သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိရိယာတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကိုသင်၏စျေးကွက်အစီအစဉ်နှင့်ဘတ်ဂျက်တွင်ထည့်သွင်းသင့်သနည်း ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ webinars တွေကအရည်အချင်းပြည့်မီတဲ့ကားမောင်းတဲ့နေရာမှာထိပ်ဆုံးအကြောင်းအရာအမျိုးအစားအဖြစ်သတ်မှတ်လို့ပဲ။
မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်သည် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူနှင့်သီးခြား webinar ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သော ReadyTalk နှင့်ပါ ၀ င်သည် အကောင်းဆုံး webinar အလေ့အကျင့် နှင့်ခဲနှုန်းအဘယ်ကြောင့်ကျိုးနပ်သည်။ ငါအလွန်ကြီးစွာသော webinar stats တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်မသာ, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကသူတို့နှင့်အတူတက်လာမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် webinar စီးရီးအတွက်သူတို့ကိုအကောင်အထည်ဖော်လိမ့်မယ် လူမှုရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေး tool ကိုစပွန်ဆာ, Meltwater (ညှိနေဖို့!) ။
ထို့ကြောင့်လာမည့် ၀ က်ဘ်ဆွေးနွေးပွဲအတွက်စီစဉ်သောအခါသင်လိုက်နာရမည့်ထိပ်တန်းဝက်ဘ်ဆန်မြှင့်တင်ရေးအကြံပေးချက် ၁၀ ခုမှာဤတွင်ဖြစ်သည်။
အဖြစ်အပျက်မတိုင်မီအနည်းဆုံးတစ်ပတ်အလိုတွင်သင်၏ webinar စတင်ခြင်းကိုစတင်ပါ - အကောင်းဆုံးရလဒ်များအတွက် ၃ ပတ်အစပြုပါ။ သင်၏မှတ်ပုံတင်သူအများစုသည် webinar ၏ရက်သတ္တပတ်ကိုမှတ်ပုံတင်ရန်သွားနေစဉ်၊ သင်သည်စောလွန်းသည်ဟုမဆိုသင့်ပါ။ အရ 2013 Webinar Benchmark အစီရင်ခံစာပရိုမိုးရှင်းစတင်ခြင်းသည်အနည်းဆုံး (၇) ရက်အတွင်းစတင်ခြင်းသည်သင်၏မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ၃၆% ကျော်တိုးနိုင်သည်။ ၂ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၂၇ ရက်အထိ ၂၇%၊ နေ့မတိုင်မီ ၁၆% နှင့်နေ့ ၂၁ ရာခိုင်နှုန်းတို့ဖြင့်ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားသည်။
Webinar ကိုမြှင့်တင်ရန်အီးမေးလ်ကိုသင်၏အဓိကနည်းလမ်းအဖြစ်အသုံးပြုပါ ReadyTalk ၏သုတေသနအရအီးမေးလ်သည် webinar ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်ထိပ်တန်းနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ၅. အနက် ၄.၄၆ ဖြင့်ဒုတိယအနေဖြင့်မြှင့်တင်ရန်ဒုတိယနည်းလမ်းမှာဆိုရှယ်မီဒီယာဖြစ်သည်။ Webinar မြှင့်တင်ရေးဆိုဒ်များကိုလည်းသင်အသုံးပြုနိုင်သည် Brainy ရေဘဝဲ.
ဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့ရောက်သော် ၃ သည်အီးမေးလ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအတွက်အလွန်မှန်ကန်တဲ့နံပါတ်ဖြစ်သည် - အနည်းဆုံးတစ်ပတ်အကြာတွင် webinar မြှင့်တင်မှုစတင်နေပြီဖြစ်သောကြောင့်အီးမေးလ်လှုံ့ဆော်မှုသုံးခုသည် webinar မြှင့်တင်ရေးအတွက်အကောင်းဆုံးနံပါတ်ဖြစ်သည်။
သင့်ရဲ့ webinar ကိုမြှင့်တင်ရန်၊ အကြောင်းအရာနှင့်နားထောင်မည့်သူများအတွက်ပြproblemနာအကြောင်းပြောရန်ကန ဦး လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုပေးပို့ပါ
ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင် guest ည့်ဟောပြောသူသို့မဟုတ်ရလဒ်အခြေပြုဘာသာစကားအပါအဝင်အကြောင်းအရာလိုင်းဖြင့်အခြားအီးမေးလ်တစ်စောင်ပေးပို့ပါ
မင်းသိလား? အတွက်ပျမ်းမျှပြောင်းလဲခြင်းနှုန်း မှတ်ပုံတင်သူ -to- တက်ရောက်သူ 42%.
အင်္ဂါနေ့၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့သို့မဟုတ်ကြာသပတေးနေ့များ၌အီးမေးလ်ပို့ပါ - အ အများဆုံးမှတ်ပုံတင်ရန်နှင့်အတူရက်ပေါင်း အင်္ဂါနေ့များသည် ၂၄%၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့သည် ၂၂% နှင့်ကြာသပတေးနေ့ ၂၀% တို့ဖြင့်အင်္ဂါနေ့ဖြစ်သည်။ သင်၏အီးမေးလ်များကိုလျစ်လျူမရှုမိရန် (သို့) မဖျက်ရန်သေချာစေရန်ရက်သတ္တပတ်အလယ်တွင်ကပ်ပါ။
မင်းသိလား? ၆၄% သောလူများသည်တိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်၏ရက်သတ္တပတ်ကို webinar တွင်မှတ်ပုံတင်သည်။
သင်၏ webinar ကိုအင်္ဂါနေ့သို့မဟုတ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့များတွင်ကျင်းပပါ ReadyTalk ၏သုတေသနနှင့်အချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပရန်အကောင်းဆုံးနေ့များသည်အင်္ဂါနေ့သို့မဟုတ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့များဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေကတနင်္လာနေ့မှာအမီလိုက်နေကြပြီးကြာသပတေးနေ့မှာစနေ၊
သင်၏ webinar ကို 11AM PST (2PM EST) သို့မဟုတ် 10AM PST (1PM EST) တွင်လက်ခံပါ။ - အကယ်၍ သင့်တွင်အမျိုးသားအဆင့် webinar ပြုလုပ်နေလျှင်၊ တစ်နိုင်ငံလုံးရှိလူတိုင်း၏အစီအစဉ်ကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အကောင်းဆုံးအချိန် 11AM PST (22%) ဖြစ်ပါတယ်။ 10AM PST သည် ၁၉% ဖြင့်ဒုတိယနေရာတွင်ရှိသည်။ နေ့လည်စာစားရန်နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှလူများသည်အစည်းအဝေးများသို့တက်ရောက်ရန် (သို့) နံနက်ယံ၌အမီလိုက်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။
အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းမင်းရဲ့ webinar ကိုဖြစ်ရပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းရှိနေစေပါ။ - ငါတို့ရှိသမျှသည်သိသည်နှင့်အညီ၊ မမျှော်လင့်သောအရာများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အစီအစဉ်တွင်ပေါ်လာနိုင်သည်။ သင်၏မှတ်ပုံတင်သူများအနေဖြင့် ၀ က်ဘ်ဆွေးနွေးမှုကို ၀ င်ရောက်ခွင့်ပြုနိုင်သည်ကိုသေချာစွာစစ်ဆေးပါ။ တက်ရောက်ခွင့်မရရှိလျှင်သို့မဟုတ်နောက်မှနားထောင်လိုပါက
သင့်ရဲ့မှတ်ပုံတင်ပုံစံ2မှ4ပုံစံလယ်ကွင်းမှကန့်သတ်။ - အမြင့်ဆုံးပြောင်းလဲခြင်း ပုံစံများကို2-4ပုံစံများလယ်ကွင်းအကြားရှိပါတယ်, ပြောင်းလဲမှုနီးပါး 160% တိုးနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာ။ လောလောဆယ် webinar အတွက်လူတယောက်စာမျက်နှာသို့ရောက်ရှိသောအခါပျမ်းမျှပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းသည် ၃၀ မှ ၄၀% သာရှိသည်။ သတင်းအချက်အလက်ပိုမိုတောင်းခံရန်အလားအလာကောင်းသည်။ သို့မှသာသင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအလားအလာများကိုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့ကိုပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်ပယ်ရှားခြင်းထက်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ရောက်ရန် ပို၍ အရေးကြီးသည်။ ကျွန်တော့်ကိုလာမယ့်အချက်ဆီကိုပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။
သင်၏အလားအလာများအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုပိုမိုရယူရန်စစ်တမ်းများနှင့်မေးခွန်းများနှင့်အဖြေများကိုအသုံးပြုပါ။ ReadyTalk ၏အချက်အလက်များအရစျေးကွက်၏ ၅၄% သည်မေးခွန်းများကို အသုံးပြု၍ ပရိသတ်နှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံရန်နှင့် ၃၄% သည်စစ်တမ်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဤနေရာသည်သင်၏အလားအလာများနှင့်စကားစမြည်ပြောဆိုခြင်းကိုအမှန်တကယ်စပြီးသူတို့အကြောင်းပိုမိုလေ့လာနိုင်သောနေရာဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတော့…
In-real အချိန် repurpose ။ - တိုက်ရိုက် webinar မပြုလုပ်မီ၊ အကြောင်းအရာများကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီပြန်လည်နေရာချထားရန်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်အခြားသူများအားစိတ်ဝင်စားရန်တိုက်တွန်းပါ။
လူ ၈၉ ရာခိုင်နှုန်းက webinar ကိုဘလော့ဂ်ပို့စ်တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းကြသည်။ webinar ဆွေးနွေးပြီးနောက်ချက်ချင်းထွက်ရန်စီစဉ်ရန်သေချာအောင်ပြုလုပ်ပါ။ လိုအပ်လျှင်လိုအပ်လျှင်ရည်ညွှန်းရန် webinar ပရိသတ်အတွက်အချိတ်အဆက်အဆင်သင့်ရှိနေပါ။ အပိုဆောင်းအစွန်အဖျား - url ကိုခြေရာခံရန်နှင့်ပိုမိုတိုစေရန်အတွက် bit.ly link ကိုအသုံးပြုပါ။
သင်၏ ၀ န်ထမ်းတ ဦး ဦး တွင်တိုက်ရိုက်တွစ်တာသို့မဟုတ် ၀ က်ဘ်ဆွေးနွေးပွဲတွင်ထွက်ရန်ထွက်ရန်တွစ်တာများရှိပါသလား။ ထိုအခမ်းအနားအတွင်းသင်ပိုမိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရရှိလိမ့်မည်။
ပွဲအတွက်ရည်ရွယ်ထားသည့် hashtag တစ်ခုရှိပြီး၎င်းတို့အားစကားပြောဆိုမှုနောက်သို့လိုက်နိုင်ရန်တက်ရောက်သူများအားအသိပေးပါ။
ကောင်းပြီ၊ ဒီရိုးရှင်းတဲ့အကြံဥာဏ်များကမင်းရဲ့အနာဂတ် webinars များကိုမြှင့်တင်ရန်ကူညီလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
Tags: webinar ရှိသည်ဖို့အကောင်းဆုံးနေ့ကwebinar မြှင့်တင်ရန်အကောင်းဆုံးနေ့ရက်များwebinar ရှိသည်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်webinar တစ်ခုမြှင့်တင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများဦး ရေပြားwebinar တစ်ခုမြှင့်တင်ဖို့ဘယ်လိုသင့်ရဲ့ webinar မြှင့်တင်ရန်ကိုဘယ်လိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေး Webinarချစ်သူတစ် ဦး webinar မြှင့်တင်ရန်နည်းလမ်းများwebinar မြှင့်တင်ရေးwebinar မြှင့်တင်ရေးက်ဘ်ဆိုက်များ
ဒီဇင်ဘာ 20, 2013 မှာ 9: 06 AM
17:2014 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 8, 34
Great post Jenn .. တကယ်သိကောင်းစရာကောင်းတယ်။
မတ်လ 18, 2014 မှာ 8: 10 AM
Jenn, ငါမင်းရဲ့ post ကိုတကယ်ပျော်ခဲ့တယ် ဝဘ်ကိန်းများနှင့်ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံသည်သင်ပြောဆိုရာအများစုနှင့်ကိုက်ညီသည်။ မှတ်ပုံတင်စာရင်းသွင်းသူအများစုသည် webinar မတိုင်မီနောက်ဆုံးအပတ်တွင်စာရင်းသွင်းကြောင်းသင်မည်သို့ကောက်ချက်ချသည်ကိုသိလိုသော်လည်းကျွန်ုပ်သိလိုသည်။ မကြာခဏဖိတ်ကြားချက်များကို ၂-၃ ပတ်ကြိုတင်ပြီးမကြာခဏကျွန်ုပ်တို့ပေးပို့လေ့ရှိပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖိတ်ကြားချက်အများစုသည်ပထမဖိတ်ကြားချက်ပြီးလျှင်ချက်ချင်းရောက်လာသည်။ မင်းရဲ့အတွေ့အကြုံကိုပိုသိချင်တယ်။
မတ်လ 18, 2014 မှာ 2: 06 pm တွင်
ဟိုင်းဘင်! သင်၏မှတ်ချက်နှင့်တုံ့ပြန်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ON24 webinar အခြေခံစံနှုန်းမှမှတ်ပုံတင်သူနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ http://www.on24.com/wp-content/uploads/2013/02/ON24_Benchmark_V8.pdf။ ပထမဆုံးအီးမေးလ်ကိုပို့လိုက်တဲ့အခါမှာလည်း ၀ င်ရောက်လာတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါသင်္ချာကိုလုပ်ခဲ့တယ်၊ ငါတို့ပြီးခဲ့တဲ့နောက်ဆုံး webinar မှာအီးမေးလ်ကုန်သွားပြီးနောက်ချက်ချင်းစာရင်းပေးသွင်းသူတွေထက်တစ်ပတ်အတွင်းမှာလူတွေပိုပြီးမှတ်ပုံတင်ခဲ့တယ်။ သင်၏မှတ်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အားလုံးကောင်းမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
မတ်လ 21, 2014 မှာ 11: 01 AM
အကောင်းဆုံးအကြံပေးချက်များ။ ကျွန်ုပ်ပထမ webinar ကို ၂ ပတ်အတွင်း hosting လုပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ငါတတ်နိုင်သမျှ Thes အကြံပေးချက်များကိုများများသုံးလိမ့်မယ်။
14:2014 pm မှာဇွန် 1, 47
အကောင်းဆုံးအကြံပေးချက်များ! တကယ်တော့ကျွန်ုပ်သုတေသနတွင်တွေ့ခဲ့ရသည့်အကောင်းဆုံး webinar မြှင့်တင်ရေးအကြံပေးချက်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏ webinar ပြန်ဖွင့်ခြင်းကိုအစဉ်မပြတ်ပြောဆိုရန်အချို့သူများမည်သို့ပြောဆိုမည်ကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်။ အချို့သောကျွမ်းကျင်သူများကသင်၏ပရိသတ်ကရရှိနိုင်သည့်ပြန်လည်အသုံးပြုမှု၊ တိုက်ရိုက်တက်ရောက်သူသင်ခန်းစာများရှိတော့မည်ကိုသိသောအခါ။
7:2014 pm တွင်အောက်တိုဘာ 7, 45
6:2014 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 5, 45
ကျနော်တို့ဒီလနှောင်းပိုင်း webinar ကျင်းပရန်စီစဉ်ထားသည်။ ကျနော်တို့ကဒီအကွံဉာဏျမြားကိုအသုံးပွုပါမယျ။
အကယ်လို့သင်က webinar ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအချိန်ဇယားကိုတင်လိုက်ရင်တကယ်ကိုအေးအေးဆေးဆေးပဲ။
7:2014 pm မှာနိုဝင်ဘာ 11, 08
ရစ်ချတ်၊ ဒါကကောင်းတဲ့အကြံပဲ။ ဒါကိုကျွန်မရဲ့တန်းမှာထည့်လိုက်မယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မေလ 10, 2015 မှာ 3: 07 pm တွင်
ထိပ်တန်း post !!!
မေလ 15, 2015 မှာ 2: 26 pm တွင်
ငါသည်သင်တို့၏ post ကိုတွေ့ရှိခဲ့အလွန်ဝမ်းမြောက်! ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ န်ဆောင်မှုများကို webinars မှတစ်ဆင့်တိုးချဲ့ရန်စတင်နေပြီဖြစ်ပြီးမည်သည့်နေရာတွင်စတင်မည်ကိုသဲလွန်စမရှိပါ။ သင်ဤကဲ့သို့သောတစ်ခုခုနှင့်အတူတိုက်ရိုက်အကြံပေးခြင်းသို့မဟုတ်အကူအညီတောင်းပါသလား ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖလော်ရီဒါအလယ်ပိုင်းရှိ Apple နည်းပညာအထောက်အပံ့နှင့်ပညာရေးကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။
မေလ 17, 2015 မှာ 9: 35 pm တွင်
ဟိုင်းတယ်ရီ! သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုဤရေးသားပြီးကျွန်ုပ်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များအားလုံးကိုကူညီပေးသောဂျဲန်သို့ကျွန်ုပ်ထံပေးပို့ပါမည်။
4:2015 pm တွင်ဇူလိုင်လ 6, 12
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ post အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကွန်ြတော် webinars အတွက်ညနေခင်းတွေမဖော်ပြဘူးဆိုတာကိုငါတွေ့တယ်။
အကယ်၍ ၎င်းသည်အိမ်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်လျှင်၎င်းသည်အချိန်ကောင်းမဟုတ်ပါ။ မည်သည့်အချိန်နှင့်နေ့ရက်ကိုသင်အကြံပြုမည်နည်း
19:2016 pm တွင်ဇူလိုင်လ 11, 10
အကောင်းဆုံးအကြံပေးချက်များ Jenn! ဤသည်မှာကျွန်ုပ်သည် Google မှတွေ့ရှိခဲ့သော webinar နှင့်ဆက်နွှယ်သောအရှိဆုံးဖြစ်သည်။ ကျန်တဲ့သူတွေကခင်ဗျားတို့လိုမတိုဘူး။ အချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
19:2016 pm တွင်ဇူလိုင်လ 2, 14
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, Iris! ငါ 2016 အတွက် update လုပ်ဖို့လိုပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဒီ webinar မြှင့်တင်ရေးအတွက်အချို့သောအချိန်ကုန်ဆုံးသောအကြံပေးချက်များဖြစ်ကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်အားအသိပေးပါ။ ကူညီရတာဝမ်းသာပါတယ်။
သြဂုတ် 31, 2018 မှာ 10: 01 AM
ဤနေရာတွင်ဂရိတ်သတင်းအချက်အလက်။ လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ webinars တွေကို social media မှာမြှင့်တင်တာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရတယ်။ Facebook သည်အကြီးဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်အကောင့်တွင်ပြုလုပ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်စီးပွားရေးအကောင့်တစ်ခုကိုဖွင့ ်၍ သတ်မှတ်ထားသည့်ပေးဆောင်ရသောလူမှုမီဒီယာကြော်ငြာများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ မျှဝေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!